यो भने येशूले गुलाब फर्क गर्छ? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
म ईस्टर लागि सबै बाहिर जाने मेरो परिवार हुर्किने सम्झना. हामी हप्ता मल जाने चाहन्छु अघि र ईस्टर खरायो संग तस्बिर लिन. म व्यक्तिगत विचारमा सबै छुट्टी mascots को creepiest छ. एक विशाल खरायो? त्यो छोराछोरीलाई लागि traumatizing गर्नुपर्छ. त्यो मात्र होइन, तर उहाँले सप्ताहांत मा आफ्नो घर मा देखाउनका गइरहेको बताए हुनुहुन्छ? जे भए पनि इस्टर मा, हामी चर्च जाने चाहन्छु, र त्यसपछि हामी घर आउन चाहन्छु. हामी एक ईस्टर अन्डा शिकार गर्न चाहन्छु. हामी परिवार भन्दा छ चाहन्छु. हामी त्यहाँ सामान सबै प्रकारको संग सानो ईस्टर बास्केट छ चाहन्छु.
र हामी धेरै त्यस्तै कथाहरू छ. मेरो गैर-मसीही मित्र पनि धेरै समान कथाहरू छ. यी कुराहरू सबै हामी येशूको पुनरुत्थान उत्सव पछि तरिका थाह जहाँ एक संस्कृति मा बढ्दै छ, तर धेरै गर्न यो छैन उत्सव लागि साँच्चै आवश्यक छ.
किन यो छलफल महत्वपूर्ण छ
आज हामी सोधेर र जवाफ प्रयास गरिरहनुभएको प्रश्न छ: येशू साँच्चै गम्भीर देखि खडा यदि यो कुरा गर्छ? पक्कै यो तपाईं के चाहन्छु सबै ईस्टर अन्डा hunts छ भने कुरा छैन. येशूले संग गर्न बिल्कुल केहि छ. तर हामी सबै जीवनको त्यस भन्दा चाहनुहुन्छ. म यो एक धेरै सान्दर्भिक प्रश्न हो लाग्छ, र म यो केही कारण सोध्न महत्त्वपूर्ण लाग्छ.
1, केही यो कहिल्यै भयो लाग्छ छैन. हामी धेरै असम्भव हुन मृत्यु पछि एक मानव को पुनरुत्थानको विचार. जब हृदय रोक्न, त्यहाँ थियो गर्न कुनै जीवन छ. शरीर फेरि जाँदै प्राप्त छैन. हामी यसलाई देख्न कहिल्यै गर्नुभएको, यो प्रकृतिको नियम संग फिट जस्तो छैन, र धेरै छ कि यो के गरेनन् विश्वस्त महसुस. त्यसैले यस बारेमा सोच्न महत्त्वपूर्ण छ.
2, हामी अरूलाई अप्रासंगिक रूपमा विचार. हामी त बाटो यसको बारेमा धेरै विचार छैन. शायद उहाँले गर्नुभयो, शायद उहाँले गर्नुभयो. कि सबै मेरो जीवनको के गर्न छैन. शायद म ध्यान येशूले केही बिन्दुमा पछि मेरो जीवन मा तिर्छु, तर अब म राम्रो छु. म रमाइलो भएको छु, म नयाँ कुराहरू पर्दाफास भइरहेको छु, म सिक्दै छु, म एक जग वा पेसा बनाउन प्रयास छु. म अहिले साँच्चै पुनरुत्थानको बारेमा चिन्तित छु. तर पुनरुत्थानको छैन जो कोहि लागि अप्रासंगिक छ. र म भनेर प्रमाणित आज हाम्रो छलफल चलिरहेको बेला चाहन्छु.
3, हामीलाई केही बस प्रेरणादायक रूपमा पुनरुत्थानको कथा विचार. यो तपाईंको परिस्थिति माथि बढ्दो को एक प्रतीक हो. यो पछिल्लो माथि मानिसहरूको मन र हृदय कब्जा गर्नुपर्छ भनेर एउटा सुन्दर कथा हो 2000 वर्ष. शायद वहाँ कथा एउटा नैतिक छ, तर केही भन्दा बढी.
कारण म यो ती दृष्टिकोण को सबै तीन बाइबल येशूको पुनरुत्थानको बारेमा सिकाउँछ के भन्दा फरक छन् किनभने कुरा महत्त्वपूर्ण छ लाग्छ. त्यसैले हामीलाई धेरै बाइबल भन्दा पुनरुत्थानको बारेमा विभिन्न कुराहरू विचार भने हामी आफूलाई मामिलामा वा छैन भनेर सोध्नुपर्छ गर्छ. इस्टर सिजन यो चर्चा गर्न एक महान अवसर हो.
यदि यो छ हामी पुनरुत्थानको हेर्न कसरी तब जवाब छैन, यो कुरा छैन. तर तपाईंले पहिले नै अंदाजा गर्नुभएको छैन भने, म एक मसीही हुँ र म येशू गम्भीर बाहिर अप वास्तवमा पायो लाग्छ. र मात्र म यो मामलाहरु लाग्छ छैन, म हामी यो बिना सबै आशाहीन हुनुहुन्छ लाग्छ.
म उहाँले उठेको किन विचार
म छोटकरीमा म येशू मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको विश्वास किन बताउन चाहनुहुन्छ. म यी समय को एक टन खर्च गर्न जाँदै छु, किनभने यो कुरा को उद्देश्य छैन. उद्देश्य राती यो मामलाहरु वा छैन कुरा हो, तर म त्यो वास्तवमा गुलाब जिद्दी र आधारित दावी गर्न लागिरहेको छु भने, म तपाईंलाई कारण म यो विश्वास जान्न चाहन्छु.
1. एक ऐतिहासिक घटना रूपमा बाइबल व्यवहार यसलाई
जब तपाईं धर्मशास्त्र पढ्न, प्रेरितहरूको वास्तवमा भन्दा कम केहि रूपमा पुनरुत्थानको व्यवहार छैन. यो तिनीहरूले आफूलाई Fables लेखन हुन विचार छैन भन्ने स्पष्ट छ. येशूले स्वर्ग मा उकालो लागेर पछि जब प्रेरितहरूको प्रवचन प्रचार, तिनीहरूले येशूको मृत्युको कुरा (जो uncontested) र एउटै शक्ति संग येशूको पुनरुत्थानको. यदि दुवै वास्तविकताहरु हुन्.
धर्मशास्त्र येशूले शाब्दिक ब्यूँती भनेर स्पष्ट छ. र म धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन हुन विश्वास. म यसलाई विश्वसनीय गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास. मलाई लाग्छ छैन यो झूठ वा गलत छ. र यो लेखिएको बाटो तपाईं यसलाई गरे भने तपाईं यो लेख्न थियो कसरी छैन. जो म पुनरुत्थानको भयो विश्वास दोस्रो कारण मलाई ल्याउँछ.
2. म भरपर्दो गवाही भरोसा
हामी सबै अरूबाट गवाही आधारमा कुराहरू स्वीकार. हामी बास्केटबल खेल मा थिएनन्, तर हामी खेल announcers वा त्यहाँ पूर्वदृश्य थिए मित्र विश्वास. तपाईं शारीरिक प्रमाण आवश्यक छैन. तपाईंले तिनीहरूलाई भरोसा. हामी कक्षा छुटेका, तर हामी आफ्नो टिप्पणीहरू मा पारित गर्न सहपाठी भरोसा. हामी Gettysburg ठेगानामा थिएनन्, हामी कुनै पनि दृश्य छैन, तर हामी यो भयो कि भरोसा. यी शब्दहरू हामी अब्राहम लिंकन को ती हुन् भनेर विश्वास.
अब मलाई थाहा यी कुराहरू पुनरुत्थानको भन्दा फरक छन्, तर म भन्न भन्न, त्यहाँ हामी एक विश्वसनीय स्रोतबाट यसको बारेमा सुने किनभने हामी भयो विश्वास छ कि घटनाहरू छन्. यो यदि यो अविश्वास गर्न कुनै कारण त्यहाँ के गर्न एक प्राकृतिक र समझदार कुरा हो.
बाइबलमा पुनरुत्थानको बारेमा कुरा गर्ने मान्छे, जहाँसम्म म बता गर्न सक्छन् छन्, विश्वसनीय साक्षी. मलाई उनलाई अविश्वास गर्न को लागि कुनै कारण छ. वास्तबमा, त्यहाँ येशूले देखे जो eyewitnesses सयौं थिए. म कुनै पनि अदालत जहाँ विचार गर्न सक्दैन 500 eyewitnesses एक मामला प्रमाणित गर्न पर्याप्त हुन छैन. म गवाही भारी छ र येशूले मरेका देखि पुगेको हुनुपर्छ भनेर विश्वास.
3. यो तथ्य को सर्वश्रेष्ठ स्पष्टिकरण छ
मसीहीधर्म सुरु धेरै रोचक छ. तपाईं गालीलको एउटा यहूदी मानिस जन्म छन्, अख्तियार एक नयाँ तरिका संग सिकाउन. चमत्कार गरिरहेको. अनुयायीहरूलाई भेला. यहूदी पदाधिकारीहरूसँग समस्यामा रही. आफ्नो साथीहरूले त्याग्ने. हत्या भइरहेको. र त्यसपछि आफ्नो चिहान खाली हुन पाइन्छ.
र तरिका यो मानिस, जसले अचम्मको things- नियम के थियो भने, शासन, मृत्यु पनि तीन days- मन्दिरमा एक आन्दोलन को स्रोत बन्छ पुनर्निर्माण. चेलाहरूले उहाँलाई छोडेर. तिनीहरू डराएका थिए र तिनीहरूले व्यर्थमा उहाँको पछि लागे जस्तै निरुत्साहित यो देख्यो किनभने. तर त्यसपछि हामी प्रेरित पुस्तकमा पढ्दा, हामी तिनीहरूले अचानक प्रोत्साहन र साहसी सबै हुनुहुन्छ भनेर हेर्न. अनि येशूले लागि सतावटको सामना गर्न तयार.
तिनीहरूले परमेश्वरको भनेर सिकाउँछ, एक यहूदी संस्कृति गर्न, जो एक परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने बुझेका. तिनीहरू उहाँले चिहानबाट उठेर भनेर सिकाउँछ, र तिनीहरूले हुन्छ पछि चाँडै यो सिकाउन. त्यसैले मान्छे वरिपरि अझै पनि छन्. यदि यो हुन गरेनन्, यो squashed हुनेछ. अधिकारीहरूले सम्पूर्ण अवस्था बन्द सक्थे, जो तिनीहरूलाई खतरा थियो, बस मानिसहरूले उहाँको शरीर देखाएर. यो आन्दोलन बढ्छ, र येशूको अनुयायीहरू धेरै छन्. हजारौं चाँडै पछि. ती बाह्र चेलाहरू मध्ये एक तर सबै, ख्रीष्टको विश्वास लागि हत्या भइरहेको पुग्छन्. यो मानिस को लागि हत्या. तिनीहरूले पक्का थिए, र उहाँले परमेश्वरका पुत्र थियो भन्ने तथ्यलाई प्रतिबद्ध, तिनीहरूले यसको लागि मारिए कि मृत देखि पुगेको.
तपाईं कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? म ती तथ्य को सबै भन्दा राम्रो व्याख्या लाग्छ, उहाँले वास्तवमा चिहानबाट वृद्धि गरे छ. मलाई थाहा म माथि गरे भनेर एक पौराणिक कथा लागि मर्न छैन. यी सबै मानिसहरू विश्वस्त सक्ने मात्र कुरा, उहाँले वास्तवमा उठे छ.
भनेर मनमा संग त्यसैले, म पुनरुत्थानको निहितार्थ केही मार्फत कुरा गर्न चाहन्छु.
समय बाँकी त्यसैले, हामी त भनेर प्रश्न कुरा छौँ. येशूले चिहानबाट खडा यदि यो कुरा गर्छ. म यसलाई मामलाहरु मलाई लाग्छ किन बताउन लागिरहेको छु. मैले बाइबल देखि एक खण्डमा देख गरेर के गर्न लागिरहेको छु, 1 कोरिन्थी 15. अनि त्यो खण्डबाट, म तपाईंलाई पुनरुत्थानको तीन निहितार्थ देखाउन लागिरहेको छु.
मा 1 कोरिन्थी 15, पावलले मात्र होइन एक ऐतिहासिक तथ्यलाई रूपमा पुनरुत्थानको व्यवहार, तर यो गरेको निहितार्थ जीवन र मृत्युको छन् भने.
यी तीनवटा कारण यो कोठा मा हामी हरेक एक एक लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्. तिनीहरू हरेक एक व्यक्ति जीवित लागि महत्त्वपूर्ण छन्. र तपाईं म एक क्षणमा भनेर विश्वास किन देख्नु. यहाँ पावलले भन्छन् के:
तर त्यहाँ मरेका कुनै पुनरुत्थानको छ भने, त्यसपछि पनि ख्रीष्टको खडा गरिएको छ छैन. र यदि ख्रीष्ट खडा गरिएको छैन, त्यसपछि हाम्रो प्रचार व्यर्थ छ र आफ्नो विश्वास व्यर्थ छ. हामी पनि परमेश्वरको misrepresenting गर्न पाइन्छ, हामी ख्रीष्टलाई खडा परमेश्वरको बारेमा testified किनभने, कसलाई भन्ने मृत खडा छैन साँचो हो भने उहाँले उठाउनु भएन. यदि मरेको खडा छैन लागि, पनि ख्रीष्टको खडा गरिएको छ छैन. र यदि ख्रीष्ट खडा गरिएको छैन, आफ्नो विश्वास निरर्थक छ र तपाईं आफ्नो पाप अझै पनि छन्. त्यसपछि ख्रीष्टमा सुतेका छन् जो पनि ती perished छन्. ख्रीष्टमा हामी यो जीवनमा आशा छ भने मात्र, हामी सबै भन्दा pitied गर्न सबै मानिसहरू को हुन्.
(1 कोरिन्थी 15:13-19 ESV)
म. यदि येशू उठाउनु भएन, कुनै राम्रो समाचार छ
म के भन्न खोजिरहेका गर्छन्? पक्कै राम्रो हो भन्ने समाचार मा कहिले काँही यहाँ हामी कुराहरू छन्. तर म मतलब परम राम्रो समाचार, के बाइबल सुसमाचारको भनिएको. यो सत्य हो, तापनि त्यहाँ भन्ने समाचार र हाम्रो जीवनमा के केही राम्रो कुरा हो, हामीलाई दिन सक्छ भन्ने पनि कुरा एकछिन आशा, ती कुराहरू ती कुनै पनि हामीलाई एक चिरस्थायी आशा दिन सक्छ.
एक कर फिर्ता चेक हामीलाई स्थायी आशा दिन सक्दैन. एक स्नातक कार्यक्रम मा स्वीकृति ys चिरस्थायी आशा दिन सक्दैन. एक संलग्नता वा विवाह, हामीलाई स्थायी आशा दिन सक्दैन. यी कुराहरू सबै अन्त हुनेछ. र तिनीहरूले एक क्षण हामीलाई बाट छीन लिया गर्न सकिन्छ. त्यहाँ रहन्न कुनै पनि आशा छ? त्यहाँ विश्वव्यापी र महान् भन्ने कुनै आशा छ?
बाइबल धेरै व्यावहारिक र इमानदार हाम्रो संसारको स्थितिको बारेमा छ. हामी भङ्ग गर्दै, हाम्रो संसार भङ्ग छ, र सृष्टिको सबै पुनःस्थापित गर्न आवश्यक. हामीलाई थाहा छ हाम्रो संसार भाँचिएको छ. रोग प्राकृतिक प्रकोप बाट. र अपराध. जस्तै त्यहाँ अब हरेक दिन शूटिंग नयाँ ठूलो छ यसलाई देखिन्छ. के भइरहेको छ? Brokenness.
यो बस बाहिर त्यहाँ हुनत छैन. हामी सबै पनि भङ्ग गर्दै. हाम्रो जीवनमा यो प्रमाण हाम्रो पाप छ, हाम्रो चिन्ता, हाम्रो भङ्ग सम्बन्ध, द्वन्द्व आपसमा, र सबै को खराब, परमेश्वरले हाम्रो अलग.
के तपाईं कहिल्यै हामीले हामी बाटो किन सोचेको? किन कुनै कुरा कसरी कठिन हामी प्रयास हामी सिद्ध हुन सक्दैन? किन हामी के कुरा के? हामी किन कुराहरू फिर्ता जा राखन भनेर हामीलाई चोट राख्न? हामी किन विनाशकारी निर्णय? हामी किन अरूलाई चोट? हामी भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ. त्यो नराम्रो समाचार छ.
येशूले परमेश्वरको पुनर्स्थापना पठाइएको जसलाई एक छ, र विशेष हाम्रो सृष्टिकर्ता हामीलाई पुनर्स्थापना गर्न. त्यो राम्रो समाचार छ.
त्यहाँ मसीहीधर्म संसारका धर्महरूले फरक छ भन्ने कुरामा कुनै शंका छ. ख्रीष्टियन बारेमा अद्वितीय कुराको एउटा यो एक अद्वितीय तरिकामा ऐतिहासिक घटनाहरू आधारित कि छ. त्यहाँ हामी भरोसा वास्तवमा भयो कि केही कुराहरू छन्. हामी एक वास्तविक मानिस भरोसा, जो वास्तवमा मृत्यु भएको थियो, र जो वास्तवमा मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको. र यदि ती कुराहरू साँचो छैनन्, त्यसपछि एक मुक्तिदाता बारेमा राम्रो समाचार छैन साँचो छ.
इस्लामी विश्वासमा मुहम्मद अगमवक्ता, मर्यो. मुस्लिम थाहा आफ्नो शरीर र आफ्नो गम्भीर जहाँ. र यो कुनै तरिका मा एक मुसलमान विश्वास नोकसान पुग्छ.
यो बुद्ध आफ्नो मृत्यु पछि cremated थियो, र विभिन्न परिवारलाई वितरण थिए दाहसंस्कार अवशेषहरूको छन्. त्यसैले हामी जहाँ बुद्ध शरीर थाह. र कुनै तरिकामा बौद्ध विश्वास नोकसान पुग्छ.
कन्फ्युसियस 'शरीर चीन मा आफ्नो जन्म ठाउ मा गाडे छ. एउटै जोसेफ स्मिथ को भने हुन सकेन, विभिन्न पोप गरेको, आदि. र यी मानिसहरू कुनै तरिकामा मरे भन्ने तथ्यलाई आफ्नो अनुयायीहरूलाई विश्वास नोकसान पुग्छ.
तर कसैले येशूको मृत शरीर फेला थियो भने, ख्रीष्टियन अवस्थित गर्न ceases. क्रिश्चियन चर्च व्यर्थ हो. क्रिश्चियन प्रचारक फटाहा छन्. र ख्रीष्टका अनुयायीहरूले निराशजनक छन्. पाठ्यक्रम येशूको मृत शरीर फेला गर्न अस्तित्व भने, अधिकारीहरूले बस मानिसलाई धार्मिक भक्ति फैलाउने स्क्वास गर्न मानिसहरूलाई यो देखाइएको थियो. तर म बनाउन छु बिन्दु यसलाई मामलाहरु छ.
सबै व्यर्थ छ
पावलले यहाँ भन्छ सुन्नुहोस् 1 कोरिन्थी 15. यसअघि उनी सुसमाचार वा सुसमाचार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रूपमा औंल्याउँछन्. त्यो उहाँले तिनीहरूलाई प्रचार के भन्छन्, तिनीहरूले प्राप्त, र तिनीहरूले हाल यो खडा. तर उहाँले पद मा भन्छन् के सुन्न 14.
"अनि यदि ख्रीष्ट खडा गरिएको छैन, त्यसपछि हाम्रो प्रचार व्यर्थ छ र आफ्नो विश्वास व्यर्थ छ. हामी पनि परमेश्वरको misrepresenting गर्न पाइन्छ, किनभने हामी ख्रीष्टलाई खडा परमेश्वरको बारेमा testified। "
पावलले लाग्छ गर्दैन पुनरुत्थानको केही प्रेरणादायक कथा छ. उहाँले विश्वास यसमा टिका सोच्छ. त्यसैले हामी केही प्रेरणादायक कथा जस्तै यो व्यवहार गर्दा, हामी साथै भनेर ख्रीष्टियन भन्ने ढोङ रोक्न सक्छ. हामी राम्रो तरिकाले पनि छ कि लागि बाइबल प्रयोग गर्न सक्छ. पावलले अर्थ वा आँटेको कुरा छैन. र यो तरिका व्यवहार गर्न पवित्र पाठ को एक दुरुपयोग हो.
मसीही विश्वास समाचार आधारित छ. यो जीवनको बारेमा समाचार को घोषणा आधारित गर्नुपर्छ, मृत्यु, र ख्रीष्टको पुनरुत्थानको.
यदि त्यो छैन साँचो हो, त्यसपछि पावलले प्रचार व्यर्थ छ. त्यो मात्र होइन, तर मसीही विश्वास व्यर्थ छ. म मा के विश्वास छु, येशूको कथा राम्रो अन्त्य छैनन् भने? त्यहाँ मात्र नराम्रो समाचार छ. म एक पापी हुँ, येशूले बारेमा कुरा गर्न प्रयास, तर अन्त मृत्यु उहाँलाई पायो
त्यसैले यदि उहाँले उठाउनु भएन, कुनै राम्रो समाचार छ.
तर उठाउनु उहाँले गर्नुभयो देखि, त्यहाँ राम्रो समाचार छ
त्यहाँ राम्रो समाचार छ! समाचार सत्य हो. हामी परमेश्वरको पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ. म तपाईं को पहिलो केही पदहरू पढ्न चाहनुहुन्छ 1 कोरिन्थी 15.
अब म तपाईंलाई सम्झाउने थियो, भाइहरूलाई, म तिमीहरूलाई प्रचार सुसमाचार को, जो तपाईंले प्राप्त, जसमा तपाईं खडा, र जो तपाईं सुरक्षित भइरहेको छ, तपाईं शब्द अडिग भने म तिमीलाई व्यर्थमा विश्वास-जबसम्म तपाईं प्रचार. म पहिलो महत्व रूपमा वितरित लागि के म पनि प्राप्त: ख्रीष्टको अनुसार धर्मशास्त्र संग हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो भनेर, उहाँले गाडे कि, उहाँले अनुसार धर्मशास्त्र संग तेस्रो दिन मा खडा थियो, अनि त्यो Qउहाँले Cephas देखा पर्नुभयो, त्यसपछि गर्न बाह्र. त्यसपछि उहाँले एक समयमा पाँच अधिक सय भाइहरू देखा पर्नुभयो, कसको भन्दा अझै जीवित छन्, हुनत केही सुतेका छन्. त्यसपछि उहाँले याकूब देखा पर्नुभयो, त्यसपछि सबै प्रेरितहरूलाई. सबै को अन्तिम, रूपमा एक असामयिक स्वाभाविक गण, उहाँले मलाई पनि देखा.
1 कोरिन्थी 15:1-8
येशू हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो. अनि उहाँले हाम्रो पापको लागि गुलाब. कि सुसमाचार कथा को भाग हो. त्यो पापी लागि ठूलो समाचार छ.
येशूले मृत्युबाट बौरी भन्ने तथ्यलाई उहाँले परमेश्वरको बारेमा र आफूलाई बारेमा भने सबै कुरा पुष्टि गर्छ. त्यो के टिकटहरु आफ्नो सन्देशको. कुनै पनि विश्वासको कुनै अन्य नेता वा बनाउन हुनेछ गर्न सक्ने दावी छ.
यो पनि छ कि भाग साँचो छैन भने तपाईं यो समाचार त त्यो भन्छन् कि पावलले महत्त्वपूर्ण छ भनेर, त्यसपछि आफ्नो प्रचार व्यर्थ छ. तपाईं आइतबार जाने चर्च बारेमा सोच्नुहोस्. पुनरुत्थानको साँचो कि असर गर्ने थियो थिएन भने आफ्नो प्रचार मा सबै? तपाईं पनि ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको बारेमा सुन्नु र यो हाम्रो जीवन कसरी लागू हुन्छ?
यो पुनरुत्थानको आफ्नो जीवन लागू हुन्छ. किनभने जीवन कठिन छ यो तपाईं को लागि मामलाहरु. पाप वास्तविक छन्. रोग वास्तविक छ. मृत्यु वास्तविक छ. त्यहाँ हाम्रो लागि कुनै पनि राम्रो समाचार छ? कसले अन्त मा जीत? त्यहाँ राम्रो खबर छ. येशूले मृत्युबाट बौरी. अनि उहाँले सबै कुरा नयाँ बनाउन गइरहेको छ. चिहान रित्तो आफ्ना प्रतिज्ञाहरू साँचो हो भनेर प्रमाणित.
गरेको को निहितार्थ बारेमा कुरा गर्न होस्
द्वितीय. यदि ख्रीष्ट मरेका बाट उठाउनु भएन, त्यहाँ कुनै क्षमा छ
म क्षमा बारे केही अनियमित गीत पढ्न जाँदै छु.
"प्रभु उसलाई क्षमा, उहाँले तिनीहरूलाई उहाँको गाढा सेना पायो / तर त्यो पनि पाप लागि एक धार्मिक कारण मिल्यो। "
"प्रभु कृपया म भन्दै छैन म समाप्त छु भनेर / तर म अग्रिम प्रार्थना छु मेरो sinnin लागि मलाई क्षमा '/ / मेरो प्यान्ट मा प्ले जस्तै बाटो उनको आँखा नजर कारण।"
जे कोले, न्यानो अप
"म प्रार्थना म गरे हरेक खराब निर्णय / म प्ले हरेक बहिनी लागि क्षमा छु / / कारण म अझै पनि यो दिन paranoid छु / अनि यो मैले गरेको निर्णय गरे कसैले गरेको गल्ति हो / यो मैले चुने जीवन छ, वा बरु, मलाई छान्नुभएको जीवन "
जे-जेड, डिसेम्बर 4
"म फरक छु भनेर बहाना प्रयास तर अन्त मा हामी सबै एउटै / म प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, बुबा N **** म कहिल्यै gonna परिवर्तन छु क्षमा। "
"म एक पापी हुँ, जो फेरि gonna पाप शायद छ / प्रभु मलाई क्षमा, मैले बुझिन कुराहरू लागि प्रभु / क्षमा मलाई। "
सबैलाई क्षमा मोल. तिनीहरूले वास्तवमा परिवर्तन मा अभिप्राय छैन भनेर स्पष्ट समेत मान्छे. सबैलाई क्षमा गर्न चाहन्छ.
क्षमा लागि हाम्रो आवश्यकता
सिद्ध जसले यहाँ एक व्यक्ति त्यहाँ. हामी सबै त्रुटिपूर्ण छौं र हामी पाप. पाप यस्तो लोकप्रिय शब्द छैन. हामी कहिलेकाहीं कमजोरीको जस्तै नरम शब्दहरू रुचि, वा असिद्धता, वा गल्ती, तर शब्द "पाप" ती अर्को शब्दमा भन्दा बढी विशिष्ट कुरा संचार. बाइबल पापको बारेमा वार्ता गर्दा यसको अर्थ आफ्नो कार्यहरू परमेश्वरको disobeying, तपाईंको शब्द, वा आफ्नो विचार. यो चिन्ह हराइरहेका, गिरने परमेश्वरको आवश्यकता के को छोटो, गलत चिन्ह मा खेलकुद, परमेश्वरको विद्रोह.
अनि बाइबल पाप बस अनियमित भाँचिएको नियम छैन भनेर भन्छन्, तर पाप परमेश्वर आफैले उद्देश्य अनाज्ञाकारिताले छ. परमेश्वरको व्यक्तिगत पाप लाग्छ, उहाँलाई र उहाँको भलाइ मा व्यक्तिगत आक्रमणको रूपमा, बुद्धि, र महिमा. यस्तै तपाईं तल आफ्नो घर जल कसैले लिन चाहन्छु, मात्र आफ्नो घर मा एक आक्रमणको रूपमा, तर तपाईं मा, परमेश्वरले उहाँलाई मा आक्रमणको रूपमा आफ्नो सिर्जना गरेर कुनै पनि अनाज्ञाकारिताले लिन्छ. त्यहाँ उहाँले स्वामित्व छैन केही छ. पाप राम्रो परमेश्वरको विरुद्ध अपराध हो. र त्यही परमेश्वरले हामी खडा छौं गर्ने न्यायाधीश छ.
तपाईं को लागि यहाँ मेरो प्रश्न छ: तपाईं ती पापको क्षमा आशा नगर्नुहोस्? किन? किन राम्रो न्यायाधीश कहिल्यै पाप रूपमा यस्तो heinous अपराध लागि पापी हुक बन्द गरौं थियो? यसलाई पहिले नै लागि भुक्तानी गरिएको छ भने राम्रो परमेश्वरको पाप क्षमा दिनुहुन्छ भनेर मात्र तरिका हो. र त्यहाँ पाप भुक्तानी गर्न कहिल्यै दावी जसले एउटा मात्र छ, येशूले. अनि येशूको पुनरुत्थानको कि भुक्तानी स्वीकार थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो.
तपाईंको पाप मा
पावलले भने येशूले खडा गरिएको छैन बारे उल्लेख कुराहरू मध्ये एक छ: "तपाईंको विश्वास निरर्थक छ र तपाईं आफ्नो पाप अझै पनि छन्।"
यो आफ्नो पाप मा हुन के अर्थ, तपाईं तिनीहरूलाई लागि तिर्न छ. यो तिनीहरूले आफ्नो रेकर्ड मा अझै पनि हुनुहुन्छ अर्थ. यो तपाईं तिनीहरूलाई दासत्वबाट मा अझै पनि हुनुहुन्छ अर्थ. यो तपाईं तिनीहरूलाई छुटकारा गरिएको छैन मतलब. यो तपाईं तिनीहरूलाई लागि क्षमा हुनेछैन अर्थ. पापको क्षमा येशू ख्रीष्टको शाब्दिक शारीरिक पुनरुत्थान मा टिका.
जहाँ येशूले पाप माथि triumphed क्रूसमा छ. पाप र दुष्ट संग कुस्ती म्याच जस्तै छ. अनि येशूले भने माथि प्राप्त भएन, अर्थ पाप वन.
अन्य धर्म पापको क्षमा धेरै के छैन. त्यहाँ राम्रो न्यायाधीश तिनीहरूलाई किन बेवास्ता थियो लागि कुनै व्याख्या छ. आकाश मा प्राप्त खराब भन्दा बढी राम्रो गरिरहेको छ, तर खराब के? तिनीहरूले अर्को दिन सडक मार्फत पुरानो महिला मदत किनभने हामी कुनै पनि हुक बन्द हत्याराहरूलाई गरौं गर्ने न्यायाधीश प्रशंसा हुनेछ. पापको लागि भुक्तानी गर्न छ.
तपाईं आफ्नो पाप परमेश्वरको खडा गर्न चाहँदैनन्. त्यहाँ तिमी हुन सक्छ दुई ठाउँ हुन्, ख्रीष्टमा वा आफ्नो पाप मा.
र यदि येशूले उठाउनु भएन, त्यहाँ कुनै क्षमा छ.
तर उठाउनु उहाँले गर्नुभयो देखि, त्यहाँ पाप क्षमा छ!
येशूले धार्मिक प्रकार को धेरै पागल किनभने गरे, मात्र मानिसहरू निको भएको थियो, तर उहाँले तिनीहरूलाई बताइरहनुभएको थियो आफ्नो पाप क्षमा. येशूले पापको क्षमा अख्तियार. यो पोपको भनेर अख्तियार छैन, pastors भनेर अख्तियार छैन, पूजाहारीहरूले त्यो authority- मात्र परमेश्वरको छैन. अनि येशू शरीरमा परमेश्वरको थियो.
का शब्द क्षमा को अर्थमा बनाउन गरौं. मेरो साथी को अनुहार मा मलाई slaps भन्न. यो म यो ठीक छ भने यदि क्षमा हुन छैन, तर पछि यसको लागि फिर्ता उहाँलाई थप्पड गर्ने योजना बनाए. क्षमा बस म आफ्नो माफी स्वीकार होइन, उहाँले मलाई विरुद्ध पाप भने म उहाँलाई व्यवहार अर्थ. अब म विक्षिप्त हुन सक्छ र धुनमा उहाँले एक उच्च पाँच लागि जान्छ जब. म उसलाई नै भरोसा छैन, तर म उहाँको विरुद्धमा पाप पकड छैन. म उसलाई फिर्ता प्राप्त गर्न प्रयास गर्नेछ, या उसलाई तिर तीतो हुन. हाम्रो सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ.
पाप परमेश्वरको विरुद्धमा गम्भीर ठेस छ. उसलाई त गम्भीर छ, उनले यसलाई बेवास्ता छैन भनेर. उहाँले यो सजाय थियो थाह थियो. अनि परमेश्वरले हामीलाई येशूको पठाएको धेरै प्रेम. अनि येशूले हामीलाई उहाँले हाम्रो लागि क्रूसमा त्यो सजाय लिन तयार थिए कि धेरै प्रेम. त्यो पार छ के. यो येशूको stepping र पापी योग्य भनेर सजाय लिएर छ.
म अदालत कक्ष मा छु जस्तो छ र म स्पष्ट दोषी छु, तर कसैले पनि सजाय भइरहेको सट्टा मेरो लागि भनेर सजाय लिन्छ.
हामी विश्वास गर्दा ख्रीष्टको परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सम्बन्धलाई दुरुस्त. उहाँले हाम्रो रेकर्ड सफा हटाउन छौँ. यो एक जूरीको फैसला सबै ब्रह्माण्डका न्यायाधीश देखि दोषी छ. उहाँले उसलाई सम्बन्ध हामीलाई स्वीकार छौँ. उहाँले हामीलाई विरुद्ध हाम्रो पापको पकड छैन.
रोमी 4:7-8 भन्छन्, "तिनीहरू, जसका कुकर्महरू क्षमा गर्दै छन् धन्य, र जसका पापहरू ढाकिएका छन्; अनमोल कसको विरुद्धमा प्रभु आफ्नो पाप गणना हुनेछैन पुरुष हो। "
त्यहाँ आफ्नो पाप परमेश्वरको अघि खडा भन्दा ब्रह्माण्डको सबै कुनै थप भयावह कुरा हो. तर सबै ब्रह्माण्डको कुनै ठूलो आशिष् छ, परमेश्वरले क्षमा गर्न भन्दा.
अक्सर, मसीहीहरूले आत्म धार्मिक हुनुको अरूसित एउटा प्रतिष्ठा छ. र म दुःखद छ लाग्छ. भरोसा ख्रीष्टको परिभाषा आत्म धार्मिकताको सही विपरीत छ किनभने. यो हामी कुनै धार्मिकता छ admitting गर्नुपर्छ. र विश्वास परमेश्वरको आउँदै, उहाँले हाम्रो अधर्म हामीलाई क्षमा भनेर. यदि मसीहीहरूले तपाईं विश्वास गलत अर्थ लगाइन्छ छ त, तिनीहरूलाई दयालु हुन. त्यो ख्रीष्टको सिकाउनुभयो के छैन
तपाईं आफ्नो पाप को क्षमा गर्न लामो समयसम्म? म चाहन्छु तपाईं आफ्नो जीवन सोच्न. त्यहाँ हामी गर्नुभएको धेरै कुराहरू छन् कि सही छैनन्. हामी झूट गर्नुभएको, र हामी lusted गर्नुभएको. हामी धेरै fornicated र पिएको मिल्यो. हामी धेरै चोरी र ठगिएको छ. हामी धेरै अरूलाई घृणा, हामी अल्छी हुनुहुन्छ, र सूची मा जान सक्छ. हामी सबै. हाम्रो जीवन पवित्र परमेश्वरको अपमान. र म लामो ती पापको क्षमा गर्न भने आश्चर्य.
सुसमाचार छ, त्यो क्षमा येशू ख्रीष्टमा उपलब्ध छ. तर उहाँले वास्तवमा ब्यूँती भने मात्र. र मात्र, हामी जीवनमा विश्वास भने, मृत्यु, र येशूको पुनरुत्थानको.
का अन्तिम implication विचार गरौं
III. यदि ख्रीष्ट उठाउनु भएन, त्यहाँ कुनै अनन्त जीवन छ
हामी हरेक एक एक त्यहाँ मृत्युको बारेमा सही छैन कुरा हो थाह. जब हामी funerals जाने, त्यहाँ कहिल्यै piñatas र कन्फेटी छ. शोकाकुल गर्नुपर्छ त्यहाँ. त्यहाँ आँसु हो. त्यहाँ अक्सर आफ्नो जीवनमा मनाउन साथै आनन्द छ. तर हामी मृत्यु नै सोच्न गर्दा, त्यहाँ संलग्न दुःख धेरै छ. मृत्यु गलत छ किनभने. यो अस्वाभाविक हो.
हामी मृत्यु त प्रयोग हुनुहुन्छ, कि यो हामी संग सम्झौता ती तथ्यहरूलाई सिर्फ एक जस्तै देखिन्छ. तर यो पनि पाप संसारमा प्रवेश पछि भयो भन्ने कुरा छ. हामी पापी छौं किनभने मृत्यु हुन्छ. यो सही छैन. अनि हामी गहिरो निराशाको क्षणमा हुनुहुन्छ नभएसम्म, हामी कुनै पनि मृत्यु लागि लामो. हामी बाँच्न चाहन्छौं.
के तपाईं स्वर्ग जाँदै हुनुहुन्छ जब मर्न लाग्छ? हामी धेरै राम्रो स्थानको रूपमा आकाश विचार, जहाँ हाम्रो नातेदार जीवन भन्दा हुँदा जाने. अनि हामी थोडे हामी त्यहाँ आशा. र मान्छ कि, भनेर हामी मरेपछि, कि अन्त छैन. खैर पावल यसो भन्छन्, यदि कुनै पुनरुत्थानको छ, त्यसपछि त्यहाँ केही छ.
"त्यसपछि ख्रीष्टमा सुतेका भएकाहरूलाई perished छन्. ख्रीष्टमा हामी यो जीवनमा आशा छ भने मात्र, हामी सबै भन्दा pitied गर्न सबै मानिसहरू को हुन्। "
त्यहाँ तिनीहरूले बितिसकेका थिए प्रेम मान्छे थिए, हामीलाई पनि त्यस्तै. पावलले मरेका तिनीहरूले थाहा मसीहीहरूलाई कुरा छ. अनि येशूले वृद्धि भएन भने पावलले यसो भन्दै छ, त्यसपछि तिनीहरूले बस perished. तिनीहरूले सक्नुभयो. त्यहाँ परमेश्वरको कुनै सदाको छ.
अनि उहाँले भन्न पनि यतिमा, तपाईं दया गर्नुपर्छ मसीहीहरूले. तपाईं हाम्रो लागि खराब महसुस गर्नुपर्छ.
हामी किन Pitied हुनुपर्छ?
अब कुरा रूपमा ख्रीष्टियन विचार गर्ने अधिकांश मानिसहरू तपाईं बस कहिलेकाहीं अनियमित चर्च जहाँ, र तपाईं प्रभुको प्रार्थना सम्झना शायद, पावलले यस किन भन्नुहुन्छ बुझिन. आफ्नो मनमा किनभने, ख्रीष्टियनहरू साँच्चै गुमाउने छन् मात्र कुरा आइतवार छ. तर ख्रीष्ट निम्न यति अधिक छ.
ख्रीष्ट हाम्रो लागि भनिएको. उहाँले सबै कुराको लागि सोध्छन्. उहाँले हामीले हाम्रो जीवन राख्नु भनेर सोध्छन्. हामी हाम्रो पार लाग्न कि. त्यो हामी उहाँको वरिपरि हाम्रो जीवन निर्माण. र उहाँले साँच्चै उठ गर्नुभयो भने, हामी मूर्ख हुनुहुन्छ. हामीलाई दया. हामी गर्नुभएको सबै कुनै कारण लागि टाढा हाम्रो जीवन बिसाउन छ किनभने.
यदि ख्रीष्ट उठाउनु भएन, त्यहाँ कुनै अनन्त जीवन छ.
तर उठाउनु उहाँले गर्नुभयो देखि, त्यहाँ अनन्त जीवन छ!
परमेश्वरको लागि त संसारमा प्रेम, उहाँले आफ्नो मात्र पुत्रलाई दिनुभयो, कि जसले उसलाई विश्वास नष्ट हुँदैन तर अनन्त जीवन छ.
त्यहाँ अनन्त जीवन छ. तपाईं खडा गर्न सकिन्छ. र परमेश्वरको सधैंभरि बाँच्न. मसीहीहरूले pitied छैन गर्न सकिन्छ. मसीहीहरूले गम्भीर परे एक आशा गर्नेहरू. मृत्यु डर नगर्ने मानिसलाई तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? पावलले फिलिप्पी यो एक ठूलो उदाहरण हो 1. उहाँले जाने येशूको हुन पाउने अर्थ किनभने उहाँले मृत्यु ठीक छ.
तपाईं पावलले छ भनेर fearlessness भाग गर्छन्? त्यो मात्र येशूको मृत्यु र पुनरुत्थानको वास्तविकता मा विश्वसनीय जसले एक आउँछ.
सारांशमा भन्नुपर्दा: हो. येशूले उठे भने यो मामलाहरु. अनि उहाँले उठ गरे. आफ्नो कथा उहाँले मृत्यु कि अरूलाई पनि यस्तै छ. सबैजना मृत्यु. तर सबैले उठ्छ. येशूले उठे. अनि उहाँले हामी उहाँलाई छन् भने हामी पनि उठ र उहाँलाई हाम्रो सदाको खर्च हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा. तपाईं उसलाई भरोसा छ?
पावलले • अप्रिल 18, 2014 मा 11:47 छु • जवाफ
धन्यवाद, पास्टर ली. “येशूले परमेश्वरको पुनर्स्थापना पठाइएको जसलाई एक छ, र विशेष हाम्रो सृष्टिकर्ता हामीलाई पुनर्स्थापना गर्न. कि राम्रो समाचार हो।” त्यो राम्रो समाचार छ! को कन्फेटी भाग मलाई हाँस्न गरे. जब तपाईं प्रचार तपाईं हास्य को एक अद्वितीय अर्थमा छ. यो राम्रो छ.
इवान • अप्रिल 18, 2014 मा 2:14 बजे • जवाफ
थाहा तपाईं ख्रीष्टियन गर्न डाल विशिष्टताको अन्य धर्म त गहिरो लाग्यो कहिल्यै प्रेम हामी मृत्यु र जीवित गुलाब कि मुक्तिदाताको छ भन्न सक्छौं जसले मात्र हुन्छन्, वास्तवमा यहाँ छ उहाँ र एकै समयमा परेका जाने र हाम्रो लागि ठाउँ तयार पार्न
CynthiaAghomon • अप्रिल 18, 2014 मा 6:27 बजे • जवाफ
येशूले साँच्चै सबै छ…त्यहाँ येशू र जीवन बिना कुनै ख्रीष्टियन छ अर्थहीन र निराशजनक उहाँको क्रूसको बिना गरिएको थियो, मृत्यु र पुनरुत्थानको. म प्रार्थना आँखा धेरै यो महिमित घटना को सत्य खुला हुनेछ.
JacobAlger • अप्रिल 20, 2014 मा 8:11 बजे • जवाफ
मानिस यात्रा, बाडेको मा धन्यवाद. यो एक शक्तिशाली सन्देश हो. म एक बच्चा थियो देखि म एक विश्वासीले भएको तर आफैलाई बस यो धेरै प्रश्न सोधेर यो इस्टर फेला. तपाईंको सन्देश र पावलको शिक्षा यो यति स्पष्ट बनाउँछ. म आफ्नो हृदय र आफ्नो सन्देश कदर, आशिष्हरू मेरो यार!
मारियो एक. ramirez • अप्रिल 22, 2014 मा 4:04 छु • जवाफ
धन्यवाद ठूलो समय ब्रो
दीदी • अप्रिल 22, 2014 मा 7:22 छु • जवाफ
ढिलो भएकोमा मलाई माफ, तर घमन्ड गर्न निर्माण गर्न जब तपाईं मेरो प्रभु मा brag देखि नाम परिवर्तन? साथै, इस्टर को विन्दुमा उत्कृष्ट टुक्रा!
Trekkrestik • सक्छ 20, 2014 मा 8:27 बजे • जवाफ
ऐ यात्रा, मलाई केहि सोध्नु छ, निस्तार-चाड र बाइबलीय चाडहरूमा मा आफ्नो विचार whatre?
ग्रेग • नोभेम्बर 3, 2014 मा 7:58 बजे • जवाफ
म परमेश्वरको वचन तपाईंको साझेदारीको लागि त आभारी छु! यो पोस्ट मलाई बेहद प्रोत्साहन. यो येशूको राख्न सुपर हार्ड भएको’ मेरो मन को सामने मा विजय. यो मेरो दाइ देखि लगभग एक वर्ष भएको 17 वर्ष मृत्यु. एक फ्लैश परमेश्वरको कहिल्यै भयो छन् गर्नुपर्छ भनेर कुल दुर्घटना के देखिन्थ्यो मार्फत आफ्नो जीवन लिए. म उसलाई धेरै समय खर्च; मेरो सम्पूर्ण जीवन कहिल्यै ठूलो तरिकामा परिवर्तन भएको थियो–यसलाई म माथि आउँदै छु भनेर विश्वास गर्न उहाँले कहिल्यै थियो भन्दा पुरानो हुनुको मा हार्ड छ. म फेरि उसलाई देख्ने? उहाँले उठ्नेछ?
म यो पोस्ट आए किनभने म त आफ्नो गीत द्वारा प्रोत्साहित थियो “लाजरस।” तिमी मलाई यति धेरै आशिष् गर्नुभएको, र म गहिरो सत्य भनेर साझा लागि धन्यवाद छ, किनभने येशूले मृत्यु विजय हुर्केका थिए, मलाई थाहा म उहाँलाई अनुहार सामना देख्ने…र मेरो भाइ पनि. म पनि प्रोत्साहित हुनुहुन्छ आशा!
उल्लेख: ला Sagrada परिवार, #CrossEqualsLove | Sheen
Sammy • अक्टोबर 15, 2016 मा 11:34 छु • जवाफ
यो कथा सबै इतिहास ख्रीष्ट मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको थियो भन्ने तथ्यलाई मा टिका भनेर गहिरो छ …
अन्य सबै अगमवक्ताहरू कहिल्यै तिनीहरूले छ फिट गहिरो भयो भएदेखि दिन ज्योति देखेको छु ….
500 साक्षी घोर बेवास्ता गर्न केही छैन … भन्न जे Z जस्तै bloke मृत्यु र तीन दिन पछि फर्केर मरेका आए !!!!
मिडिया washout विशाल कुनै हुनेछ???
तर सम्भावनाहरू के छन् भनेर 500 यो unfolded रूपमा pepo यो घटना साक्षी हुनेछ ???
तर यदि ख्रीष्ट मृत्युबाट ब्यूँताइनुभएको छैन कल्पना क्षेत्र दिन यहूदी अधिकार हुनेथियो !!!!
को ramifications उल्लेखनीय हुनेछ …
ख्रीष्टियन कुनै ग्रह मा सबै भन्दा blasphemous धर्म हुनेछ???
तर हामी ख्रीष्टमा मरेका खडा गरिने आशा छ र हामी कथा कसरी समाप्त थाहा देखि राम्रो समाचार भन्दा बढि छ!!
JNote • सक्छ 3, 2017 मा 1:07 बजे • जवाफ
यात्रा मानिस, परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष! आफ्नो प्रवचन र शिक्षा र संगीत सुन्ने, निश्चित मलाई लिफ्टहरु. त्यो राम्रो समाचार, सुसमाचारको, कुरा मान्छे प्राय बाहिर बस्न आवश्यक छ र म तपाईंलाई यो मानिस गरिरहेको हेर्न खुशी छु. बाटो परमेश्वरले तपाईंलाई प्रयोग देख, हामी त्यही सामान धेरै भएकोले मलाई धेरै मद्दत गर्छ, musically र सेवकाईमा, त्यसैले परमेश्वरको मानिसलाई हो भन्दै राख्न, म तपाईं को लागि प्रार्थना छु.